Trump oo ku tilmaamay musiibo iyo wax laga naxo dilkii sargaalka booliska uu u geystay Floyd… – Hagaag.com
Trump oo ku tilmaamay musiibo iyo wax laga naxo dilkii sargaalka booliska uu u geystay Floyd…
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga hadlay dilkii argagaxa lahaa oo sargaal cadaan ah oo katirsan booliiska magaalada Minneapolis u geystay nin madow ah oo kamid ahaa bulshada ku dhaqan magaaladaasi.
Trump ayaa Musiibo iyo wax laga naxo ku tilmaamay dilkii sargaalka booliiska u geystay George Floyd oo ahaa nin shacab aan hubeysneyn, waxa uuna tacsi u diray ehelada ninka ku baxay gacanta ciidanka booliiska.
Madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay saraakiisha baaritaanka gacanta ku haysa iyo waaxda Cadaalada dalka Mareykanka in baaritaanada ay wadaan marka ay soo gabo gabeeyaan in ay qaadaan talaabo deg deg ah.
”Waxaan ka codsaday FBI-da iyo waaxda cadaalada in ay si wanaagsan u wadaan baaritanada dhacdadan musiibada ah, waxaana ka codsaday baaritaanada kadib in talaabo adag la qaado,” ayuu yiri Madaxweyne Trump.
Dilka sargaalka Cadaanka ah uu u geystay ninka Madowga ahaa ayaa caro badan abuuray gudaha Mareykanka, waxaana magaalada Minneapolis oo falkan ka dhacay ka socda banaan baxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dad u badan madow.